Nei uchisarudza isu | BAODING YINGTESHENG BRISTLE UYE Bhurashi KUITA CO., LTD
YTS yakashongedzera anopfuura zana seti eemi-otomatiki uye otomatiki bhurasho kugadzira uye kuyedza michina, iyo inogona kuvandudza kugona kweYTS kugona zvakanyanya. Panguva imwecheteyo, YTS yakazvimiririra yakagadzira otomatiki ferrule-yekugadzira michina uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoenderana neyakagadzirwa maitiro ayo. Iyo yakatsaurirwa otomatiki yekugadzira michina yakasiyana nevamwe vari muindasitiri. Uye zvakare, isu tinogona kuve neakawanda masimba pane edu zvigadzirwa kuendesa nguva (ETD & ETA). Iye zvino YTS ine goho remamirusi makumi mashanu emamirioni, mamirioni makumi matatu ematairi uye anopfuura mazana matatu ematani emabhurukwa zvinhu.
YTS ine vashandi vanopfuura zana nemakumi mashanu ekugadzira musangano uye isu tese takaona semi-otomatiki uye zvizere otomatiki yekugadzira mitsara yekuita. Dhizaini yezvivakwa zvebasa zvakagadziriswa uye zvine musoro. Iyo michina yekugadzira iri nyore uye yakangwara, izvo zviri nyore kuti vashandi vashande. Vese vashandi vepamhepo vane hunyanzvi hwekudzidzira uye vanoteedzera nenzira kwayo uye nemhando yepamusoro YTS's yemhando yekudzora sisitimu iri mukati meyese maitiro kubva kugondohwe zvinhu kusvika pakupedzisa chigadzirwa. Isu tinoshandisa 20% sampling kuongorora uye 100% yakazara kuongorora mushure mekunge zvigadzirwa zvese zvapera.
Rabhoritari yedu inoshandiswa kuyedza mabhurashi edu uye kutsvaga nzira dzekuvandudza. Isu tinoita yakawanda yakawanda nzvero tisati tatengesa mabhurashi edu kumusika, zvigadzirwa zvedu zvitsva zvinogadzirwa zvakare murabhoritari iyi.